Isatifikethi esiyi-12 esiPhezulu soLawulo loKwakha kwi-Intanethi ngo-2022
Isatifikethi esiyi-12 esiPhezulu soLawulo loKwakha kwi-Intanethi
Unokufumana isatifikethi solawulo sokwakha esisemthethweni kwi-intanethi esiya kukuxhobisa ngezakhono zomphathi wokwakha oqhelekileyo kwaye sikuncede ufumane umsebenzi ebaleni.
Thina kwiSifundo saMazwe ngaMazwe siqulunqe uluhlu lweenkqubo eziphambili zolawulo lokwakha kwi-Intanethi kunye nesatifikethi oya kuthi ulufumane luluncedo kakhulu.
Ulawulo lokwakha lisebe lobunjineli baseburhulumenteni elisebenzisa ubuchwephesha bokulawulwa kweprojekthi ukongamela ukucwangciswa, uyilo kunye nolwakhiwo lweprojekthi.
Umphathi wolwakhiwo ngulowo wenza lo msebenzi, Oko kukuthi, ophethe ulongamelo kuyo yonke iprojekthi yokwakha ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni.
Ngaphandle kwabaphathi bokwakha, akusayi kubakho mntu uyakuyila ngokufanelekileyo aze enze iiprojekthi zokwakha. Ke, zibalulekile kwiiprojekthi zokwakha njengoko iinjineli zibandakanyeka kule projekthi.
Oku kwenza ukuba ubuchule bube kukufunwa ngakumbi kuba ngaphambi kokuba kuqalwe ukwakhiwa kwayo nayiphi na iprojekthi umphathi wokuqala wolwakhiwo uya kubizwa kuqala ukuba enze isicwangciso.
Kwaye ngenxa yokuba kukho ulwakhiwo oluninzi ngakumbi noluya kwakhiwa kwixesha elizayo, oku kwenza ulawulo lwezokwakha lube yingcinga yeshishini elizayo. Ukuba ubusele ucinge ngokuseka ikhondo lomsebenzi ebaleni eli nqaku liza kukunceda ekuqaliseni loo msebenzi.
Ukuba sele uyinjineli yombutho, mhlawumbi umntu ophethe isidanga njenge-bachelor's, master's, okanye ugqirha, ungabhalisa kwezi nkqubo zidweliswe ngezantsi.
Ezi zifundo ziya kukuxhobisa ngezakhono zegcisa, umphathi wokwakha osebenzayo, kwaye ukongeza ukuba eso sakhono sele sikhona siya kukwenza uxabiseke kakhulu kuwe, kumbutho wakho, okanye kuqalo lweshishini lakho.
Uya kuxhotyiswa ngezakhono zale mihla, kubandakanya indlela yokusebenzisa ubuchwephesha beli xesha kunye neetekhnoloji ukwenza umsebenzi wakho usebenze ngakumbi, ukhawuleze kwaye ubelula. Emva kwezifundo zakho, uya kufumana isatifikethi sokugqitywa kwaye ube ngumphathi wokwakha oqinisekisiweyo.
Isatifikethi sinokuqhotyoshelwa kwisidanga sakho esele sikhona kunye nesakhono esifakwe kwi-CV yakho okanye kwi-resume. Isatifikethi singathunyelwa kuwe njengekopi ethambileyo okanye ekhuni okanye zombini, nokuba yeyiphi na indlela oyithandayo, ukubonisa abathengi abanokubakho kunye nabaqeshi, kokubini kwi-Intanethi nakwi-intanethi, ubungqina besakhono sakho.
Ukuba sele usebenza nenkampani yokwakha kwaye ufumana isatifikethi njengomphathi wolwakhiwo, unokuba ujonge kunyuselo kunye nokunyuswa kwemivuzo.
1 Ukufumana iSatifikethi soLawulo loKwakha kwi-Intanethi
1.1 Ndingasifumana isidanga solawulo lokwakha kwi-intanethi?
1.2 Ngaba ungangumphathi wezokwakha ngaphandle kwesidanga?
1.3 Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana isatifikethi solawulo lokwakha?
2 Isatifikethi esiPhezulu soLawulo loKwakha kwi-Intanethi
2.1 Ingcali kuLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseColumbia
2.2 ISatifikethi seBakala lesiGqeba kuLawulo loKwakha, kwiKholeji yaseAshworth
2.3 ISatifikethi seNgcali kuLawulo lweProjekthi yoKwakha, kwiYunivesithi yaseSan Diego
2.4 Inkqubo yeSatifikethi soLawulo loKwakha, u-UC Davis
2.5 Isatifikethi kuLawulo loKwakha, uLwandiso lwe-UCLA
2.6 ISatifikethi seMatriki kuLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseDrexel
2.7 Inkqubo yeSatifikethi kuLawulo loKwakha nobuNkokeli, i-UC Berkeley Extension
2.8 ISatifikethi kuLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseWashington
2.9 ISatifikethi sePost-Baccalaureate kuLawulo loKwakha, i-LSU kwi-Intanethi
2.10 Isatifikethi kuLawulo loKwakha, iZisombululo zoQeqesho lwaBasebenzi (STS)
2.11 ISatifikethi soLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseHouston
2.12 ISatifikethi seMatriki kuLawulo loKwakha, kwiYunivesithi yaseNyakatho-mpuma
2.14 I ngcebiso
Ukufumana iSatifikethi soLawulo loKwakha kwi-Intanethi
Inye kuphela into ekufuneka uyiqaphele apha kukuba akunyanzelekanga ukuba ubambe isidanga kubunjineli ngaphambi kokuba ubhalise kwiinkqubo zolawulo lokwakha.
Kufuneka ube nezona mfuno ziphambili zokufunda, ezizolwazi lwakho ikakhulu kwi-physics nakwimathematics.
Ayinamsebenzi ukuba ugqibile kwisikolo samabanga aphakamileyo kutshanje okanye kwiminyaka emininzi ubuyile, ngolwazi lwe-physics kunye nezibalo, ungajoyina iinkqubo zolawulo lokwakha, ufumane isatifikethi, kwaye ujoyine abasebenzi.
Ndingasifumana isidanga solawulo lokwakha kwi-intanethi?
Ewe unga! Ngokuqinisekileyo!
Kulula kwaye kuyakhawuleza ukuyifumana. Awuyi kuhamba noxinzelelo lokuya kwiklasi yobuso ngobuso, kunye ne-PC yakho kunye noxhumano oluzinzileyo lwe-intanethi unokufumana i-bachelor's, master's, okanye ugqirha kwizikolo eziphezulu kwi-intanethi.
Ikwakunika ithuba lokukhetha nasiphi na isikolo osifunayo, okoko nje bebonelela ngenkqubo kwi-intanethi kwaye ugqithisa iimfuno zokwamkelwa, ungabhalisa kwaye uqalise ukufunda.
Ngaba ungangumphathi wezokwakha ngaphandle kwesidanga?
Ngaphandle kwesidanga solawulo lokwakha, unokufumana kuphela iindima zokungena kwinqanaba njengoko eminye imibutho iqesha abantu abanezatifikethi, umz. IDiploma ePhambili, kulawulo lwezokwakha.
Ke, unokusebenza ngendlela yakho ngaphandle kwesidanga kodwa iinkampani ezininzi zikhetha ukuqesha abaphathi abanesidanga se-bachelor.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana isatifikethi solawulo lokwakha?
Iinkqubo zesatifikethi zahlukile kwiinkqubo zesidanga. Ngelixa iinkqubo zesatifikethi zigxila ngakumbi ekufundiseni abafundi izakhono ezithile kunye nezisebenzayo ezinxulumene nalo msebenzi, izidanga zibonelela ngemfundo ngokubanzi kwizifundo ezininzi eziphambili ukugqiba inani elithile leeklasi okanye iikhredithi kwizifundo ezinjengezibalo, isiNgesi kunye nesayensi.
Kwakhona, iinkqubo zesatifikethi zifuna iinyanga ezimbalwa ukuba zigqitywe, ngelixa iidigri ezinje nge-bachelor's kunye nenkosi zifuna i-4 kunye ne-1-2 iminyaka ngokwahlukeneyo ukugqiba.
Ke ngoku, isatifikethi solawulo lokwakha sithatha iinyanga ezimbalwa ukusigqiba ngelixa isidanga sithatha malunga ne-3-4 okanye i-1-2 iminyaka kuxhomekeke ekubeni yeyiphi na inkosi, ibachelor, okanye ugqirha.
Kule posi siqulunqe konke oku kungentla, oko kukuthi, isatifikethi kunye nenqanaba kulawulo lokwakha onokuthi ujoyine kwi-Intanethi. Iinkqubo zi-100% kwi-Intanethi kwaye zinikezelwa ngamaziko aphezulu kwihlabathi liphela.
Isatifikethi esiPhezulu soLawulo loKwakha kwi-Intanethi
Ingcali kuLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseColumbia
ISatifikethi seBakala lesiGqeba kuLawulo loKwakha, kwiKholeji yaseAshworth
ISatifikethi seNgcali kuLawulo lweProjekthi yoKwakha, kwiYunivesithi yaseSan Diego
Inkqubo yeSatifikethi soLawulo loKwakha, u-UC Davis
Isatifikethi kuLawulo loKwakha, uLwandiso lwe-UCLA
ISatifikethi seMatriki kuLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseDrexel
Inkqubo yeSatifikethi kuLawulo loKwakha nobuNkokeli, i-UC Berkeley Extension
ISatifikethi kuLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseWashington
ISatifikethi sePost-Baccalaureate kuLawulo loKwakha, i-LSU kwi-Intanethi
Isatifikethi kuLawulo loKwakha, iZisombululo zoQeqesho lwaBasebenzi (STS)
ISatifikethi soLawulo loKwakha, iYunivesithi yaseHouston
ISatifikethi seMatriki kuLawulo loKwakha, kwiYunivesithi yaseNyakatho-mpuma
IYunivesithi yaseColumbia ibonelela ngezobugcisa kwizatifikethi zolawulo lokwakha kwi-intanethi, kwaye yenzelwe iinjineli, iingcali, kunye nabayili bezakhiwo kwishishini lokwakha. Abafundi abanomdla wokufunda ngolawulo lwezokwakha nabo baya kuxhamla kule khosi.
Le khosi iya kuphuhlisa abafundi abanolwazi olusisiseko kulawulo lokwakha, ibaxhase ngocwangciso lweprojekthi olubalulekileyo kunye neendlela zokucwangcisa. Ngokubhalisa kule nkqubo, uya kufumana izakhono kuqikelelo lweendleko, ulawulo lweendleko, ezemali, ucwangciso lweprojekthi, ulawulo lwezokwakha, nokunye okuninzi.
Le nkqubo ayibonisi isidanga kodwa isatifikethi kwaye inokugqitywa malunga neenyanga ezi-5 kwaye ukufunda kuhamba ngesantya sakho. Ekupheleni kwezifundo zakho, uya kufumana isatifikethi.
Ikholeji yaseAshworth ibiza iingcali, abakhi bezakhiwo kunye nabantu kwicandelo lobunjineli ukuba beze kufumana isatifikethi solawulo lokwakha kwi-intanethi. Ngale nkqubo, ikholeji yaseAshworth ibonelela abafundi ngobomi bokwenene, izakhono ezilungele umsebenzi ezixatyiswe kakhulu kwishishini lokwakha.
Ukubhalisa kule nkqubo kunye nokufumana isatifikethi sokuthweswa isidanga ekugqibeleni, awuyi kuphuma kuphela kwabanye kwicandelo lokhuphiswano kodwa uya kubonisa abaqeshi ubuchule bakho kunye nokulungela ukuthatha izikhundla eziphezulu.
Ikholeji yaseAshworth liziko eliphakamileyo eligunyazisiweyo, ke uyafunda kwikholeji ekumgangatho ophezulu kwaye uyakufumana isatifikethi esisemthethweni ekupheleni kwezifundo zakho. Inkqubo yi-100% kwi-intanethi kwaye uya kufunda ngesantya sakho, kwishedyuli yakho.
Fumana isatifikethi solawulo lolwakhiwo kwi-Intanethi ngeYunivesithi yaseSan Diego, le nkqubo ibonelela ngesishwankathelo semigaqo kunye neendlela ezilungileyo zolawulo lweprojekthi yokwakha ebonelelwe kwifomathi ecacileyo necacileyo.
Le nkqubo yeyobungcali, engeyiyo ingcali, kunye neewbies ezingena kwaye sele zikwicandelo lokwakha.
Ngezakhono ezifunyenwe kule nkqubo, uya kuba nakho ukusebenza ngezifundo ezizezinye, ukusombulula nokuphendula imibuzo kunye nemiba enxulumene nesiza, kwaye ube nakho ukuphatha ezinye iingxaki ezinxulumene nolawulo lokwakha.
Inkqubo ihanjiswa ngokupheleleyo kwi-Intanethi oko kuthetha ukuba ungafunda ngesantya sakho, kwaye inokugqitywa kwiinyanga ezi-5.
Ukuqhubeka kwe-UC Davis kunye neMfundo yobuNgcali kubonelela ngesatifikethi solawulo sokwakha kwi-intanethi ukukunceda ucije kwaye upolishe izakhono zakho ebaleni. Inkqubo yenzelwe ukuxhobisa zonke iintlobo zabafundi ngezakhono ezifanelekileyo zokugqwesa kwicandelo elinxulumene noko.
Uya kuqhubeka ngokufunda ishishini, ulawulo kunye nezakhono zobuchwephesha ukuze ube yikontraka yokwakha, umphathi wolwakhiwo, kwaye ngokufanelekileyo uthathe isikhundla sobunkokeli kwishishini lokwakha.
Ukonwabela iindlela ezahlukeneyo xa ubhalisa kule nkqubo kubandakanya ulwazi olusebenzayo lwenkqubo esekwe kulawulo lokwakha, ukhetho olufanelekileyo lokufunda, kunye nokunye.
Ulwandiso lwe-UCLA ngumgama / iqonga lokufunda kwi-Intanethi le-UCLA kwaye ungabhalisa kwaye ufumane isatifikethi solawulo lokwakha kwi-intanethi. Inkqubo ibonelela ngekharityhulam ebanzi, ehlaziyiweyo egubungela uluhlu lwemiba emininzi kwishishini lokwakha kunye nezinto ezibonakalayo zentsimi.
Uya kufumana uluhlu olubanzi lwezakhono ezinje ngoqikelelo lweendleko, ukwazi ukufunda nokutolika iiplani zokwakha, ukulungiselela iishedyuli zeprojekthi kunye nokunye. Ezi zakhono zinokukufaka kwindima ephambili kwishishini lokwakha kwaye zikuncede ekwenzeni iiprojekthi zokwakha ezingqongqo.
Inkqubo yi-100% kwi-Intanethi ukuze ke ufunde ngesantya sakho. Iikhredithi zikwadluliselwa kwamanye amaziko kwabo bafuna ukulandela inqanaba eliphezulu kakhulu.
IYunivesithi yaseDrexel ibonelela ngenkqubo yokuthweswa isidanga kwizatifikethi zolawulo lokwakha kwi-intanethi, ikhosi yeenkqubo zonke zinikezelwa ngokufunda nge-Intanethi, okwenza abafundi bonwabele ishedyuli yokufunda ngokuzimela kunye nokuguquguquka.
Le nkqubo iqeqesha abafundi ukuba babe ziingcali kwishishini lokwakha, libaxhobise ngezakhono zobugcisa nezomeleleyo ezifunekayo ukuze baphumelele ebaleni. Uya kuqhubeka nokufunda ukuba ungazisebenzisa njani iindlela zenzululwazi ukusombulula iingxaki, ube ziingcinga ezibukhali, izinto ezintsha, kunye nokwakha inqanaba labafundi lokuyila.
Ukuba ungumnini wesidanga ofuna ukuphucula okanye uhlambe ulwazi kunye nezakhono zakho, akufuneki uchithe ixesha ekubhaliseni le nkqubo. Abantu abanolwazi olusisiseko lokwakha banokujoyina le nkqubo, kwaye baqinisekiswe, ngabaphathi bezokwakha abaqeqeshiweyo.
I-UC Berkeley Extension liqonga lokufunda kwi-Intanethi / kumgama eyunivesithi kwaye ukuba ubonelela ngeedigri ezahlukeneyo kunye nezatifikethi ezikwi-Intanethi kuluhlu olubanzi lweenkqubo. Isatifikethi solawulo lokwakha kwi-Intanethi yenye yazo. Ungabhalisa ukuba unomdla wokushiya inqanaba lakho lokungena kwaye ufuna ukuthatha indima yokuphatha kwishishini lokwakha.
Inkqubo inikezelwa nge-100% kwi-intanethi kwaye iya kukunika ikharityhulam esexesheni efundiswe ziingcali zeshishini kwimimandla yolawulo lweprojekthi, uqikelelo lweendleko, ucwangciso, i-BIM, umthetho wolwakhiwo, kunye neendlela zokwakha eziluhlaza.
Ekupheleni kwenkqubo, uya kuba nakho ukusombulula iingxaki ebaleni, uphuhlise ubunkokheli obunamandla kunye nezakhono zokunxibelelana ngokubaluleke kakhulu kwinkqubela phambili yakho yomsebenzi kwizikhundla eziphezulu zolawulo.
IYunivesithi yaseWashington ibonelela ngesatifikethi solawulo lolwakhiwo kwi-Intanethi eyilelwe iingcali ubuncinci iminyaka emihlanu yamava kwicandelo lokwakha. Le nkqubo ibandakanya yonke imiba ephambili yenkalo exhobisa abafundi ngeendlela ezahlukeneyo zolawulo lwezokwakha ezinje ngocwangciso lweeprojekthi, uhlahlo-lwabiwo mali, ucwangciso, ulawulo lomgangatho, ukhuseleko, izivumelwano kunye nophuhliso lwabasebenzi.
Ngokugqibezela le nkqubo kunye nokuqinisekiswa, uyifezekisile imfuneko yokujoyina i-Master of Science kwi-Intanethi kuLawulo loKwakha esanikezelwa yiYunivesithi yaseWashington. Ukuba unomdla wokufumana i-intanethi ye-intanethi kulawulo lokwakha, ukugqiba le nkqubo yesatifikethi kwenza kube lula njengoko unokudlulisa iikhredithi.
IYunivesithi yaseLouisiana State ineqonga eliyisebenzisayo ukuhambisa iinkqubo zemfundo ezikwi-Intanethi kunye neenkqubo zokufunda umgama ezaziwa ngokuba yi-LSU Online.
Ngokusebenzisa i-LSU Online, iYunivesithi yaseLouisana State inokunikela ngezifundo ezahlukeneyo kunye neenkqubo zesidanga kwi-intanethi kubantu abathi ngenxa yomcimbi omnye okanye omnye abakwazi ukuza esikolweni.
Phakathi kweenkqubo zakhe ezininzi, i-LSU Online ibonelela ngesatifikethi solawulo lolwakhiwo kwi-Intanethi esivulekileyo kwiingcali ezijonge ukupholisha izakhono zabo okanye abanye abantu abafuna utshintsho lomsebenzi kulawulo lokwakha. Abafundi abavela kuyo yonke imimandla yokufunda bayamkelwa ukuba babhalise kule nkqubo kodwa kufuneka babe nemfuno yokufunda kwizidanga ze-bachelor's kunye ne-2.0 GPA ubuncinci.
Iyonke iyure yekhredithi kwinkqubo nganye ziiyure ezili-18 zetyala kwaye iindleko zizonke ngekhredithi yi- $ 326. Kuba le nkqubo ikwi-intanethi ngokupheleleyo, ungasigqiba isatifikethi ngesantya sakho ukusuka naphi na ehlabathini kunye nexesha leenyanga ezi-6 ukuya kwezi-12.
Izisombululo zoQeqesho lwaBasebenzi (STS) liziko loqeqesho kwi-Intanethi eliqeqesha abantu kwizakhono ezahlukeneyo zokufuna kwaye libanikeze izatifikethi eziqinisekisiweyo.
I-STS ikwabonelela ngesatifikethi solawulo lokwakha kwi-intanethi kwaye sixhobisa abafundi ngezakhono ezibaluleke kakhulu kwimpumelelo yabo kwicandelo lolawulo lokwakha.
Inkqubo ivulelekile kwiingcali nakwabo bangengobuchule kwicandelo lokwakha, befuna ukuphucula izakhono zabo esele zikho, ukufumana izakhono ezitsha, okanye ukujonga utshintsho kwikhondo lomsebenzi. Onamava okanye ongenamava kwicandelo lokwakha angayithatha le khosi kwaye abe ziingcali ngokukhawuleza.
Inkqubo yesatifikethi ibonelelwa ngokupheleleyo kwi-intanethi, ihamba ngokuzimela, kwaye ifuna malunga neeyure ezingama-200 ukugqiba.
Ikholeji yeTekhnoloji, iYunivesithi yaseHouston ibonelela ngesatifikethi solawulo lolwakhiwo kwi-intanethi evulekileyo kuye wonke umntu onomdla wokufumana okanye ukuphucula izakhono zabo kulawulo lokwakha. Ke, bobabini iingcali kunye nabantu abafikayo banokubhalisa kule nkqubo kwaye bafumane isatifikethi.
Inkqubo ibonelela ngobuchule obunqamlezileyo kunye neziseko ezinje ngeendleko zokwakha, iishedyuli, kunye nezivumelwano eziyilelwe ukunceda abasebenzi abaqeqeshiweyo, iinjineli zentsimi, iishedyuli, abalawuli beekhontrakthi, abaqikeleli, njl.
Inkqubo yokuqinisekiswa inikezelwa ngokupheleleyo kwi-Intanethi, oko kuthetha ukuba ungabakho naphi na emhlabeni kwaye ujoyine inkqubo kwaye ufunde ngesantya sakho. Ukufumana isatifikethi, umfundi kufuneka agqibe iikhosi ezine ezikwi-Intanethi kwiMigaqo yoLawulo loKwakha, uLawulo lwekhontrakthi, uqikelelo lweendleko zoKwakha, kunye noCwangciso kunye nokucwangciswa.
Ikholeji yezifundo zobungcali kwiYunivesithi eseMantla mpuma ibonelela ngesatifikethi solawulo lolwakhiwo kwi-Intanethi phakathi kwezinye iinkqubo ezikwi-Intanethi. Inkqubo yenzelwe ukubonelela abaphumeleleyo ngesakhono esomeleleyo sokuseta nasekuqhubeni iiprojekthi zokwakha kumacandelo karhulumente nawabucala.
Ukuba unamava kwishishini lokwakha kwaye ujonge ukufumana izakhono ezitsha kunye nokupolisha ezindala, le yinkqubo yakho. Ngesatifikethi sakho, uya kufumana indawo ephezulu kwicandelo lokwakha kwaye ukuba sele usebenza, unokufumana unyuselo kwisikhundla sokuphatha.
Inkqubo ikwi-100% kwi-intanethi, ke unokubakho naphi na emhlabeni kwaye ujoyine inkqubo kwaye ufunde ngesantya sakho. Isatifikethi sinokugqitywa phakathi kweenyanga ezi-6 ukuya kwezi-12, ngokusisigxina kunye nokwexeshana ngokwahlukeneyo.
Ezi ziinkqubo ezili-12 zolawulo lwezokwakha onokuzifumana kwi-Intanethi ngeli xesha.
Ukulandela amakhonkco anikezwe kwinkqubo nganye, ungabhalisa kwaye uqalise ukufunda kwangoko.
Ezi ziqinisekiso zikhethwe ngesandla ukuze zilungele iimfuno zakho zemfundo kwicandelo lolawulo lokwakha.
Iikhosi ezi-5 eziPhezulu zeKhemistry kwiKhredithi yeKholeji
I-13 yeeScholarship eziphezulu kwi-UAE yeeExpats (ngaBafundi beZizwe ngezizwe)
Iikhosi ezingama-27 zasimahla kwi-Intanethi zoKhuseleko ezineZatifikethi
23 Iimviwo zeSiqinisekiso seSimahla se-Intanethi
izifundo zekhompyutha funda kwi-intanethi
isatifikethi solawulo lolwakhiwo kwi-intanethi
Post Previous:I-Diploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo esi-15 esiVunyelweyo kwi-Intanethi
Okulandelayo Post:Iinkqubo ezili-13 zexabiso eliphantsi kwi-Intanethi zoBunjineli boLuntu
Umqeqeshi woLawulo loKwakha @ CMTI uthi:
April 14, 2021 kwi 8: 25 am
Le bhlog iluncedo kakhulu kubaqeqeshi bobuNjineli boLuntu abafuna iikhosi zesitifiketi ezikwi-Intanethi. Enkosi ngokubhala oku. Ndiza kwabelana nabantu ngale blog.